Adwennwene​—Sɛnea Wobɛma Afiri Wo So
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Adwennwene—Sɛnea Wobɛma Afiri Wo So
“Ná mete sɛ obi a ogyina faako retwa ne ho; ɔnkɔ baabiara. Ná metaa yɛ adwuma nnɔnhwerew 16 daa, na edu Memeneda ne Kwasiada koraa a, na meda adwumam. Me bo fuu me ho efisɛ mɛba fie biara na me babaa ketewa ada. Adwennwene bɔɔ me yare.”—Kari, Finland.
ƐNYƐ Kari nko na adeɛ ahia no. Adɔeɛ kuo bi wɔ United Kingdom a wɔboa wɔn a adwennwene da wɔn so. Kuo no de too dwa sɛ, Britainfo a wɔyɛ adwuma no, wuyi nnipa 5 a, emu 1 kae sɛ adwennwene tumi bɔ no yare, na sɛ adwuma kyere wɔn so paa a, nnipa 4 biara mu 1 su wɔ adwumam. Ɛberɛ a sikasɛm yɛɛ basaa nnansa yi no, nnipa a na wɔtɔ nnuro nom de te wɔn adwennwene so no dɔɔso.
Dɛn na ama adwennwene abɛtɔ wo so?
Adwuma amene wo?
Wo ne nkurɔfo ntam nwo?
Asɛm a ɛyɛ ya bi ato wo?
Dɛn na adwennwene de agya wo so?
Asɛe wo ne nkurɔfo ntam?
Adwennwene tumi pusu nipadua no. Ɛma wohome ntɛmntɛm, wo koma bɔ paripari na wo mogya nso bɔ ntɛmntɛm. Bio nso, ɛma mogya nkwammoaa ne asikyire a ɛwɔ wo nipadua mu no pu begu wo mogya mu. Saa nneɛma wei nyinaa ma nipadua no yɛ krado sɛ ɛne dekode a akɔfa adwennwene aba wo so no bɛko. Sɛ ɛne no ko wie a, na etuo akɔtwere nea ɛtwere. Na sɛ ade korɔ no ankɔ a, ebetumi ama adwennwene no ayɛ kɛse ama asɛm no asɛe koraa. Enti sɛ wusua sɛnea wubeyi adwennwene afiri wo so a, ɛbɛma wo nipadua ne w’adwenem nyinaa adwo wo.
Nea Ɛbɛma Adwennwene Afiri Wo So
Adwennwene nhyɛ da nyɛ bɔne. Adwene ho Animdefoɔ Fekuo a ɛwɔ Amerika no kae sɛ: “Adwennwene ayɛ sɛ sankuo ahoma; emu go a, nnwom no nyɛ dɛ, emu yere pii nso a, na ano ayɛ yayaaya. Adwennwene pii tumi kum nnipa, nanso adwennwene kakra betumi ama asetena ayɛ anika. Enti nea aka ne kwan a wobɛfa so ayi afiri wo so.”
Ade foforo a ɛwɔ adwennwene ho nie: Ɛsono obiara apɔmuden ne sɛnea otumi gyina nsɛm ano. Enti adeɛ a egya obi adwennwene no, empusu obi koraa. Sɛ w’adwuma twe wo mu nsuo araa ma wunnya bere nnye w’ahome, anaa asɛm si putupuru na wunnya berɛ nni ho dwuma a, ɛkyerɛ sɛ adwennwene da wo so.
Nea ebinom de ko adwennwene ne nsã, nnuro, ne sigaret. Ebinom nso didi basabasa anaa wɔtena TV ne kɔmputa ho saa. Nanso emu biara ntumi nyi mfiri hɔ; nea etumi yɛ ara ne sɛ, ɛma asɛm no sɛe koraa. Ɛnneɛ dɛn paa na yebetumi de ako adwennwene?
Deɛ ɛboa nnipa bebree ma wɔtumi ko adwennwene ne sɛ, wɔde afotusɛm a ɛwɔ Bible mu yɛ adwuma. Nyansa a ɛwom no aboa nnipa pii; wunnye nni sɛ ebetumi aboa wo? Sɛ wubetumi abua saa asɛm no a, hwɛ nneɛma nnan a ɛde adwennwene ba yi:
1 WO DAAKYE
Obiara nnim ɔkyena asɛm. Sɛnea Bible kyerɛ no, ‘asiane to yɛn nyinaa bere a yɛnhwɛ kwan.’ (Ɔsɛnkafo 9:11) Ɛbɛyɛ dɛn na woatumi agyae daakye ho adwennwene? Sɔ wei hwɛ:
Ka deɛ ɛha wo biara kyerɛ wo ho nipa bi anaa w’adamfo paa bi. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ, sɛ wo ho nipa bi boa wo saa a, nkakrankakra, wubehu sɛ adwennwene ho nsunsuansoɔ no kɔ fam. Ampa, “ɔyɔnko berɛbo dɔ bere nyinaa; ɔyɛ onua a wɔwoo no maa ahohia da.”—Mmebusɛm 17:17.
Nnwene sɛ bɔne bi rebɛto wo. Woyɛ saa a, ebegya wo adwennwene kwa. Nea ɛrehunahuna wo no, ebia na amma saa mpo. Weinom nyinaa nti na Bible se: “Munnnwinnwen ɔkyena ho, na ɔkyena ankasa benya ne dadwen.”—Mateo 6:34.
Ma mpaebɔ ntumi wo. Bible se, “Montow mo dadwen nyinaa ngu [Onyankopɔn] so, efisɛ odwen mo ho.” (1 Petro 5:7) Onyankopɔn ma yenya asomdwoe, na wɔn a wɔkɔ ne nkyɛn kɔhwehwɛ awerɛkyekye wɔ ahokyere berɛ mu no, ɔhyɛ bɔ sɛ ‘ɔrennyaw wɔn da.’—Hebrifo 13:5; Filipifo 4:6, 7.
2 ADWUMA AMENE WO?
Nipa baakofoɔ, ebia wubetwa kwan akɔyɛ adwuma, wubesua adeɛ, wobɛhwɛ nkwadaa anaa w’awofo. Eyinom nyinaa betumi ama woabrɛ aboro so. Deɛ ɛha adwene koraa ne sɛ, nea yɛakeka yi biara nni hɔ a wugyae a ɛbɛyɛ yiye. (1 Timoteo 5:8) Enti dɛn na wobɛyɛ na saa nnwuma no ammu amfa wo so?
Fa berɛ no bi gye w’ahome na da sɛnea ɛsɛ. Bible se: ‘Ɔhome nsa mã ye sen ɔbrɛ ne adehunu nsa mã mmienu akyidi.’—Ɔsɛnkafo 4:6.
Yɛ nea ehia ansa na woayɛ nea ɛfata; mfa nneɛma pii nkyekyere wo ho wɔ abrabɔ mu. (Filipifo 1:10) Yɛ wo ho awiɛmfoɔ; bere a wode yɛ adwuma nso, te so. Woyɛ saa a, ɛbɛma wo ho ahan wo.—Luka 21:34, 35.
Yɛaka Kari asɛm dada; nea ɔyɛe ne sɛ, ɔtenaa ase hwɛɛ n’abrabɔ mu na afei ɔkyerɛw sɛ: “Me ara mihui sɛ m’adwuma agye m’adwene nyinaa.” Ɔtɔn n’adwuma hwehwɛɛ adwuma a ɛbɛma wanya bere atena fie. Ɔsan kae sɛ: “Seesei yɛn sika so ate kakra nanso ama me ne me yere adwennwene so ate. Ama yɛanya adaagye ama yɛn abusuafo ne yɛn nnamfonom. Seesei m’asom adwo me na meremfa sikadwuma biara nsesa da.”
3 WO NE NKURƆFO NTAM NWO?
Sɛ wo ne nkurɔfo ntam nwo a, ebetumi agya wo atipae paa, ɛnkanka ne sɛ wɔyɛ w’adwumamfoɔ. Sɛ wowɔ ɔhaw a ɛte saa mu a, nneɛma bebree wɔ hɔ a wubetumi ayɛ ama wo ho atɔ wo.
Sɛ obi gyegye wo a, nya aboterɛ; nsosɔ so. Mmebusɛm 15:1 se: “Mmuae bɔkɔɔ ma abufuw twa, na asɛm a ɛyɛ yaw hyɛ abufuw.”
Fa obuo kɔ onipa no nkyɛn na wo ne nko ara nkɔka ho asɛm. Woyɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ wode nidie ama onipa no.—Mateo 5:23-25.
Fa w’ani to fam na wubehu sɛ ebia biribi ha no nti na ɔreyɛ saa. Sɛ wuhu sɛ biribi nti na ɔreyɛ saa a, ɛbɛma ‘woatwentwɛn w’abufuw ase’ efisɛ, wo yɔnko da ne wo da. (Mmebusɛm 19:11) Ɛbɛma woahu sɛ, sɛ wo a, anka saa na wobɛyɛ.
Fa bɔne kyɛ. Sɛ wode bɔne kyɛ a, ɛyɛ anuonyam ma wo, na ɛsa wo yareɛ nso. Nhwehwɛmu a nkurɔfo bi yɛɛ no afe 2001 mu kyerɛ sɛ, sɛ “wode asɛm hyɛ wo mu” a, nea ɛde ba ara ne “komayare ne mogya mmorosoɔ.” Nanso sɛ wode asɛm kyɛ a, wo ho na ɛtɔ wo.—Kolosefo 3:13.
4 ASƐM A ƐYƐ YA BI ATO WO?
Nieng te Cambodia na atoyerɛnkyɛm pii atoto no. Afe 1974 mu no, obi too bɔmb too wimhyɛn gyinabea bi maa opirae. Afe a edi hɔ no, ne mma mmienu, ne maame, ne ne kunu nyinaa wui. Afe 2000 mu nso, egya hyee ne fie ne ne nneɛma bi, na mfe mmiɛnsa akyi no, ne kunu a ɔsan waree no wui. Ɛno bɛboom no deɛ, anka ɔrekum ne ho afiri wiase.
‘Ɔhome nsa mã ye sen ɔbrɛ ne adehunu nsa mã mmienu akyidi’
Ne nyinaa akyi no, Nieng ampa aba. Nea Kari yɛe no ara bi na ɔyɛe. Ɔhwehwɛɛ Bible mu, na nea osuae no boaa no paa ma enti otuu ne ho mae sɛ ɔde nea wasua no bɛkyekye nkurɔfo werɛ. N’asɛm no ma yɛkae nhwehwɛmu bi a Britainfo bi yɛɛ no afe 2008 mu. Wohui sɛ ɔkwan baako a “yɛde te adwennwene so ne sɛ yɛbɛyɛ nkurɔfo . . . papa”—wei yɛ asɛm a Bible aka ato hɔ dadaada.—Asomafo Nnwuma 20:35.
Nieng san nyaa anidaso sɛ daakye bi bɛba ama nnipa amanehunu nyinaa to atwa. Saa berɛ no “asomdwoe bebu” so baabiara.—Dwom 72:7, 8.
Ade a yɛde ko adwennwene yɛ nyansa ne anidaso; ne mmienu nyinaa yɛ ade kɛseɛ, na ne mmienu nyinaa nso wɔ Bible mu. Bible aboa nnipa mpempem pii. Wo nso, ebetumi aboa wo.
“Ɔkwampa” a Wɔfa So Te Adwennwene So
Apɔmuden Asoɛe a ɛwɔ United States ka sɛ: “Ɔkwampa bi wɔ hɔ a wubetumi afa so ate w’adwennwene so, ɛne sɛ wobɛyɛ nsakrae wɔ w’abrabɔ mu. Fa wei firi aseɛ: di nnuane a ahoɔden wom, tenetene w’apɔ mu na nya bere da yiye. Afei, te nsã ne kɔfe a wonom so. Hwɛ na woannom nnubɔne te sɛ cocaine, wii, ne nea ɛkeka ho biara.” Asoɛe no san kyerɛe sɛ, gye bere ne w’abusuafo ne wo nnamfo nnye mo ani, gye berɛ firi adwumam, sua gyitar anaa piano bɔ, na fa wo nsa yɛ nneɛma.